कसरी ब्याकलिङ्कहरू काम गर्ने काम गर्दछ?
लिंक पीढीको प्राथमिक विधि आला सम्बन्धित वेबसाइटहरूसँग ब्याकलिंक एक्सचेंज हो. यी आदानप्रदान सामान्यतया "हामी सिफारिस गर्दछौं," "हाम्रो प्रायोजकहरू," "हाम्रा साझेदारहरू" वा त्यस्ता कुराहरू जस्तै यस्तै पोष्टहरू. व्यवसायहरूले सोचेका छन् कि यदि तिनीहरू स्रोतसँग लिङ्क गर्छन्, त्यसपछि यो स्रोतले तिनीहरूसँग लिङ्क गर्नुपर्छ. अन्यथा, व्यवसायहरूले एउटै सन्देशहरूसँग सामूहिक ईमेलहरू पठाउनेछ. साथ लिङ्क उत्पन्न गर्ने परिणामस्वरूप तरिका, यो सट्टा वा सान्दर्भिक लिङ्क प्राप्त गर्न नि: शुल्क तरिका पनि हो. तथापि, यो लिंक निर्माण दृष्टिकोण अतीतमा फायदेमंद भएको छ, तर अहिले होइन. खोज इन्जिनहरू धेरै बुद्धिमानी भए र बुझ्न थाले कि यस प्रकारका आउने लिङ्कहरू वेबसाईटको लागि सच्चा मतहरू थिएनन् तर बरु मात्र एक वेबसाइटको लागि आफ्नो रैंकिङ बढाउन. यसैले खोज इन्जिनहरूले बाह्य लिङ्कहरूमा कम मूल्य दिन थाले जुन पारस्परिक रूपमा लेबल गरिएको छ. पछि पारस्परिक लिङ्कहरू पूर्ण भक्त भएका छन्, र धेरै साना व्यवसायहरूले तिनीहरूको रैंकिंग गुमाए. यो किसिमको लिङ्कहरू गम्भीर Google sanctions को कारण छैन, तर प्रायः सम्भावनाले तपाईंको अनुकूलन अभियानमा कुनै पनि मूल्य प्रदान गर्दैन. आकस्मिक लिङ्कहरूले साइटमा केही मूल्य ल्याउन सक्छ. यद्यपि, यो मान अघि भन्दा कम हुनेछ, र गुणवत्ता backlinks भन्दा कम. यद्यपि, एक सानो मूल्य अझै पनि मान हो. यही कारणले तपाईंले सहभागी लिङ्कहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दैन. यी लिङ्कहरूको अन्य लाभ प्रदान गर्न सक्छ - सन्दर्भ यातायात. तपाईंले सम्भवतः अधिक रेफरल ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुन्न तर पारस्परिक लिङ्कहरू, तर अझै पनि, यो तपाईंको अनलाइन व्यापारको लागि फायदेमंद हुन सक्छ.
कसरि पारस्परिक लिंक बनाउन को लागी?
सबै सहभागी लिङ्कहरू समान रूपमा सिर्जना गरिएका छैनन्. ती मध्ये केहि अन्य भन्दा बढी मूल्यवान छन्, तपाईले ब्याकलिंकहरूसँग आदान प्रदान गर्नुहुने वेब स्रोतको आधारमा. तपाईले उद्योग सम्बन्धी वेब स्रोतहरूसँग लिङ्क मात्र बदल्नु पर्छ. यदि तपाई शैक्षिक क्षेत्र र रिटेलमा आधारित हुनुहुन्छ भने यो खोज इन्जिनको लागि संदिग्ध देखिन्छ। उदाहरणका लागि, पुस्तकहरू, तर ट्राफिक एजेन्सीसँग लिङ्क आदानप्रदान. यद्यपि, तपाईले वेबसाइटसँग सामान्य गन्तव्य पाउन सक्नुहुनेछ जुन कम से कम तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित छ. उदाहरणका लागि, यदि एक यात्रा एजेन्सीले साहसिक विषयमा किताबहरूको बारेमा एक लेख प्रकाशित गर्यो, त्यसपछि तपाइँको अनलाइन पुस्तक स्टोर भण्डार यस सामग्री भित्र प्राकृतिक देख्नेछ।.
अप्रासंगिक साइटहरूको केहि लिङ्कले तपाईंको प्रतिष्ठालाई हानी गर्दैन, तर यदि तपाईसँग बढी छ भने तपाईले खोज इन्जिनको लागि तपाईंको लिङ्क प्रोफाइल संदिग्ध बनाउनको लागी जोखिम भइरहेको छ।. धेरै अप्रासंगिक लिङ्कहरू प्राय: स्प्याम जस्तो देखिन्छ र तपाइँ लिङ्क निर्माण गतिविधिहरूको प्रकारको सम्बन्धमा रातो झण्डा बढाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं संलग्न गर्दै हुनुहुन्छ।. यसमा, सबै प्राप्त रेफरल ट्राफिक गायब हुनेछ किनभने यी पारस्परिक लिङ्कहरू भक्त हुनेछन्.
अर्को कारण तपाईं वेबसाइटको गुणस्तर र प्रासंगिकताको साथ तपाईलाई लिङ्क परिवर्तन गर्दै अर्को सावधान हुनुपर्दछ कि तपाईं हुन सक्नुहुन्छ कम गुणस्तर वेबसाइटहरु लाई लिंक गर्न को लागि दंडित. यदि Google ले पत्ता लगाउँछ कि तपाइँ यो कम गुणवत्ताको स्प्यामी वेब स्रोतको रूपमा निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको प्रामाणिक वेब स्रोतको रूपमा प्रतिष्ठा विनाश हुन सक्छ।. यसले खोजी प्रणालीमा नकारात्मक संकेत दिन्छ, र तपाईंको साइट संदिग्ध अनलाइन स्रोतहरूको सूचीमा हुनेछ.
यही कारण तपाईं वेब स्रोतको गुणस्तर र प्रतिष्ठाको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न, यससँग ब्याकलिंकहरू परिवर्तन नगर्नुहोस्।. यसले भविष्यमा समस्याहरू जोगाउन मद्दत गर्नेछ. म तपाईंलाई गत6महिनाको अवधिमा वेबसाइट तथ्याङ्कहरूको समीक्षा गर्न सल्लाह दिन्छु यो वेबमा तपाइँलाई हालको वेबसाइट स्थिति (ट्राफिक प्रवाह, रूपान्तरित, समय प्रयोगकर्ता प्रति भ्रमण साइटमा आदि खर्च गर्दछ।. ) र अधिक महत्त्वपूर्ण छ यसले देखाउँछ कि कुनै वेबसाइट खोज ईन्जिनियरिङ् द्वारा दण्डित गरिएको छ वा छैन. यी सांख्यिकीय डेटा प्राप्त गर्न, तपाईं Semalt वेब विश्लेषक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Source .